Barcelona oo dooneysa Youri Tielemans xili ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Barcelona oo dooneysa Youri Tielemans xili ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay la soo wareegto Youri Tielemans sanadka soo socda laakiin waxaa laga yaabaa inay ku dhibtoonaato inay hesho ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester City sababo la xiriira dhibaatooyin dhaqaale.
Mustaqbalka Tielemans ayaa haatan si weyn loo hadal hayaa, iyadoo kooxo badan oo ay ku jiraan Real Madrid iyo Manchester United loo malaynayo inay xiiso u muujinayaan xiddiga reer Belgium.
24 jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan ee King Power Stadium waxa uu dhacayaa bisha Juun 2023, Foxes ayaana u muuqata inay ku dhibtoon doonto inay sii haysato iyada oo ay jirto xiisaha sii kordhaya ee adeegiisa.
Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , Barcelona ayaa ka go’an inay la soo wareegto ciyaaryahanka reer Belgium laakiin waxaa ku adkaan doonta inay iska bixiso qiimihii 46 milyan oo ginni ahaa oo ay dejisay kooxdii hore ee Ingiriiska.
Kooxda Ronald Koeman ayaa la sheegay inay bartilmaameedsanayso xiddig cusub oo khadka dhexe ah inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, iyadoo seegtay Georginio Wijnaldum oo ku biiray Paris Saint-Germain xagaagii.
Tielemans ayaa qaab ciyaareed aad u xooggan u ah Leicester bilowgii xilli ciyaareedka 2021-22 Premier League, isagoo dhaliyey laba gool isla markaana caawiyey laba kale sideed kulan oo uu saftay.
Previous articleSawirro: Al-Shabaab oo gubay raashin loo waday shacabka XUDUR
Next articleAntonio Conte oo u hanqal taagaya shaqada Manchester United
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Maxfalka Shibis ee magaalada Muqdisho oo ay ka socotay xuska dhalashada Nabigeena Muxammed (NNKH) ayaa maanta lagu qabtay Nin sitay...
Paris Saint-Germain oo kula dagaalami doonta Manchester City iyo Liverpool saxiixa...